0.4mm amin'ny 5mm Mill vita amin'ny alimina vita amin'ny alimo ho an'ny kitapom-bary 1050 1060 1100 3003 Bright Surface amin'ny DC material - Zhejiang Shuanglin Jiate Teknolojia Metal Co., Ltd
0.4mm amin'ny 5.0mm Mill vita ho an'ny aluminium vita amin'ny alim-bary vita amin'ny kiraro sakafo 1050 1060 1100 3003 Bright Surface amin'ny fitaovana DC
Aluminium disc Surface Finish: Taille électile et glace, sans règne rommel, légité lignée pour avoir des rétinées de White. Smout, Brightly, No zone de la logement, ne scratché, ne peut d'œil sludge
Ny kalitaon'ny fitaovana: tsy misy tanteraka amin'ny fahavoazana toy ny White Rust, ny paty solika, ny fametahana rongony, ny fahavoazana amin'ny sisiny, ny kamiao, ny dendrina, ny lava-bato, ny teboka, ny scratches ary ny malalaka amin'ny kofehy.
Manana laza tsara eo amin'ny mpanjifantsika isika amin'ny faran'ny aliminioma misy kalitao avo lenta sy mifaninana, mandresy fankasitrahana avy amin'ireo mpanjifantsika miaraka amin'ny sambo tsara indrindra sy ny fahaiza-manao matihanina. Ny kalitao dia mifanaraka amin'ny rafitra fitantanana kalitao ISO 9001.
Izy io dia manana milina 5 miloko marevaka, 4 mangatsiatsiaka milina famokarana, 4 manasaraka metaly totozy ary fitaovana famaranana tanteraka.
Ny iraka ataontsika dia ny manolotra asa fanompoana tsara indrindra ho an'ny mpanjifa amin'ny Heart and Soul. Manantena ihany koa i Nansen Industries handray fiaraha-miasa ary hanorina fifandraisana ara-barotra amin'ny mpanjifa manerana izao tontolo izao ary hanangana ny hoavy mamirapiratra miaraka aminao.
Alloy: 1050 1060 3003.
Fampiharana: fitaovam-pandevonan-kanina, koveta, sns.
Packing: amin'ny hazo palmie na trondro ary ton iray isaky ny fonosana.
Ambony: môlea vita, madio, mamirapiratra, miraratra, matevina, tsy misy volom-borona, tsy misy ratra, tsy misy okididy.
firaka tezitra famaritana
Hateviny (MG) Savaivony (MG)
3003 H14 Aluminium Circle / Aluminium Disc for Cooker Ware
DC Rolled 1100 Aluminum Aluminum Sheet HQ 3mm Thick For Kitchen Pots